CEEBEEY TACAAL: Ronaldo kol hore ayuu ka soo tagay Real Madrid laakiin weli isagaa CALANKA u haya….(BAL ARAG) – Gool FM
CEEBEEY TACAAL: Ronaldo kol hore ayuu ka soo tagay Real Madrid laakiin weli isagaa CALANKA u haya….(BAL ARAG)
Byare December 31, 2018
(Madrid) 31 Dis 2018. Cristiano Ronaldo wuxuu ka soo tagay Real Madrid Suuqii xagaaga kaddib markii uu ku biiray kooxda Juventus balse weli isagaa ugu goolal badan Los Blancos sanadkan dhammaaday ee 2018.
Weli way socotaa dooda ku aadan Real Madrid way tabtay iyo ma tabin Ronaldo, laakiin Tiro-koobka iyagaa isku hadla ,gaar ahaan marka laga hadlayo goolasha.
Ronaldo ayaa 28-gool u dhaliyay Real Madrid sanadka 2018 ka hor inta uusan ka tagin oo wuxuu hal gool dheer yahay Gareth Bale 27-gool halka uu Toban gool dheer yahay Karim Benzema 18-gool.
Kabtanka cad cadka ee Sergio Ramos ayaa isagu dhaliyay toban gool halka Marco Asensio iyo Isco ay min sideed dhaliyeen.
Waxaa taa u dheer in Ronaldo uu 28-da gool ku dhaliyay 22-kulan oo qura halka Bale ay ku qaadatay 48-kulan si uu u dhaliyo 27-gool, Benzema ayaa isna u baahday 53-kulan si uu u dhaliyo 18-gool oo qura.
Maqnaanshaha Ronaldo ayaa si wayn looga tabay Los Blancos oo kooxda waa tan lixaad ee ugu goolasha badan La Liga kal ciyaareedkan.
Barcelona, Sevilla, Levante, Celta iyo Atletico Madrid ayaa dhammaan ka wada goolal badan Real Madrid oo dhalisay 24-gool oo kaliya.
EEG Kala sarreynta Gool dhalinta Real Madrid ee 2018.
Paul Pogba oo ku DIGTAY Jose Mourinho kaddib labadii gool uu Xalay dhaliyay